अष्ट्रेलिया विशेषः ४५७ भिसामा ठगिनबाट कसरी बच्ने ?
अस्ट्रेलियाको एउटा टेलिभिजन च्यानलले केही महिना पहिले प्रसारण गरेको एउटा रिपोर्टले ठूलै हलचल मच्चाएको थियो । ४५७ भिसा मिलाइदिने नाममा एउटा सिंगापुरे कम्पनीले सैयौँ विदेशी विद्यार्थीहरूबाट लाखौं डलर ठगेको र त्यसरी ठगिनेमध्ये कैयौँ नेपाली विद्यार्थीहरू पनि परेको उक्त रिपोर्टमा देखाइएको थियो । अहिले उक्त ठगी प्रकरण अदालतमा पुगेको बुझिएको छ ।
४५७ भिसा भनेको के हो ?
विदेशी कामदारहरूलाई अस्थायी रूपमा अस्ट्रेलियामा काम गर्न दिने भिसा नै ४५७ भिसा हो । खास नाम Temporary Work (Skilled) भए पनि धेरैले यो भिसालाई यसको सबक्लास नम्बरकै आधारमा चिन्छन् । यो भिसा एक पटकमा बढीमा ४ वर्षसम्मका लागि जारी गरिन्छ । दुई वर्ष यो भिसामा बसेको व्यक्तिलाई सबै मापदण्ड पुगेको अवस्थामा उसको रोजगारदाताले पीआरका लागि पनि नोमिनेट गर्नसक्ने भएकोले यो भिसालाई पीआर पाउने एउटा गतिलो माध्यमको रूपमा लिइन्छ ।
कसरी ठगिएछन् नेपालीहरू ?
उक्त रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिएकामध्ये एक जना पीडित नेपालीले बताए अनुसार उनीसँग उक्त कम्पनीले ४५७ भिसाको लागि ४५ हजार डलर मागेको थियो । जसमध्ये उनले २० हजार डलर सुरुमै बुझाएकी थिइन् । २५ हजार डलर काम सकिएपछि दिने शर्त थियो । तर, कम्पनीले उनलाई भिसा दिलाउन सकेन र पैसा फिर्ता गर्न पनि आनाकानी गरिरहेको छ ।
के ४५७ भिसा त्यति महंगो छ ?
४५७ भिसा कामदारको लागि सबैभन्दा कम खर्चिलो भिसा हो किनभने नियमअनुसार यो भिसामा कामदार स्पोन्सर गर्दा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्दछ । ४५७ भिसाकै लागि ४०÷४५ हजार डलर खर्च गर्न खोज्नु या त विद्यार्थीले यस भिसाको बारेमा राम्रोसँग नबुझेको कारणले भएको हो या त सोझो बाङ्गो जुनसुकै बाटोबाट भए पनि भिसा लिएरै छाड्ने आकांक्षाको परिणाम हो ।
ठगिनबाट जोगिन के गर्ने ?
पैसा नदिने । यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । मैले कैयौँ नेपाली विद्यार्थी भेटेको छु, जसलाई उसको रोजगारदाताले एक डलर पनि खर्च नगराइकन स्पोन्सर गरिदिएका छन् । रोजगारदातालाई जहिले पनि काम गर्ने दक्ष, इमान्दार र मेहनती मान्छे चाहिन्छ र त्यस्ता कामदारलाई स्पोन्सर गर्न उनीहरू सहर्ष राजी हुन्छन् ।
हरेक सिक्काका दुई वटा पाटा हुन्छन् । जब कोही व्यक्ति कुनै कुराको लागि मरिहत्ते गरेर लागेको हुन्छ र सो प्राप्तिको लागि जुनसुकै मूल्य तिर्न पनि तयार हुन्छ, त्यतिखेर उसको त्यो कमजोरीबाट फाइदा उठाउने अर्को वर्ग जन्मिन्छ । लोभी भएका ठाउँमा पापीहरू पनि धेरै सल्बलाउँछन् ।
४५७ भिसा राम्रो भिसा हो । अहिले सुनिएका ठगीका घटना केही अपवादमात्र हुन् । रोजगारदाताले काम गर्ने मान्छे पाउने र कामदारले राम्रो तलब र भिसा पाउने यो व्यवस्थालाई सरकारले प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिंदै आएको छ ।
ठगीबाट बच्न भने ग्राहक सचेत हुनैपर्छ । आफूले पढेको वा लाइसन्स लिएको क्षेत्रमा सानै तहबाट भए पनि काम थाल्नु यो भिसामार्फत पीआर पाउनका लागि पहिलो खुड्किलो हो । काम सिकेपछि गतिलो रोजगारदाता नपाइने भन्ने प्रश्नै हुँदैन ।
किनभने उसलाई पनि दक्ष कामदार चाहिएकै हुन्छ । ४५७ भिसा चाहनेहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पहिल्यैबाट काम गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढाउनु उपयुक्त हुन्छ किनभने उनीहरूले तपाईंलाई उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गराउन र काम सिक्न सहयोग गर्न सक्छन् ।